FAQs - JINDONGCHENG ELECTROMECHANICAL IZIXHOBO CO, LTD..
IBHOKISI Imagnethi yomhlaba kunye PAN waqhekeza 320E
IBHOKISI Imagnethi yomhlaba kunye PAN waqhekeza 420E
IBHOKISI Imagnethi yomhlaba kunye PAN waqhekeza 650E
IBHOKISI Imagnethi yomhlaba kunye PAN waqhekeza 1000E
IBHOKISI Imagnethi yomhlaba kunye PAN waqhekeza 1250E
IBHOKISI Imagnethi yomhlaba kunye PAN waqhekeza 2000E
IBHOKISI Imagnethi yomhlaba kunye PAN waqhekeza 2500E
IBHOKISI Imagnethi yomhlaba kunye PAN waqhekeza 3200E
UXWEBHU LOKUSHINTSHA KOMATSHINI KOMATSHINI
I-Angle Grinder STAN
UKUDIBANISWA KWEXESHA LOKUGQIBELA
Umbhobho weHYDRAULIC Bender
UKUSIKA I-BANDSAW KOMATSHINI
ZOMBANE KOMATSHINI WOKUSINGA NGOKUPHATHWA NGOKUPHELELEYO
KOMATSHINI WOKUHLAWULA IHYDRAULIC
Q njani usebenzisa umatshini?
A Yitha workpiece yakho sheetmetal kwi phantsi clampbar, switsha kwi nokubotshwa, ngoko tsala isiphatho (s) engundoqo batyedi workpiece
Q Ingaba clampbar iqhotyoshelweyo njani?
A Iyasebenza, eliphethwe phantsi electromagnet enamandla kakhulu. It is akaqhotyoshelwanga ngokusisigxina, kodwa ibekwe kwindawo yayo njengezichanekileyo ibhola spring-zilayishwe ekupheleni nganye.
Eli lungiselelo ikuvumela ukwenza iimilo sheetmetal lavalwa, kwaye kwakhona ukutshintsha kwezinye clampbars ngokukhawuleza.
Q Yintoni kuxwebhu ububanzi ubuninzi oko aya kugoba?
A aya kugoba sheet yesinyithi esiphakathi 1.6 mm ubude ngokupheleleyo kulo matshini. Kunokuba ugoba yatyeba xa ubude elifutshane.
Q Kuthekani aluminiyam kwaye steel stainless?
A es, umatshini JDC Ukugoba aya kugoba kuzo. Le ubutsalane udlula ngawo notsalo phantsi clampbar kwi sheet.It aya kugoba 1.6 mm aluminiyam ubude ngokupheleleyo, kwaye 1.0 mm steel stainless ubude ngokupheleleyo.
Q njani na ukwenza kuqinisa?
Ucofa uze ubambe i eluhlaza iqhosha "Isiqalo" okwexeshana. Oku kubangela nokubotshwa ukukhanya ngemagnethi. Xa kume isiphatho eyintloko sokuyivula ngokuzenzekelayo nokubotshwa igunya ngokupheleleyo.
Q Ingaba okunene ukugoba njani?
A Wena ukwenza begoba ngesandla batsale isiphatho (s) eziphambili. Oku uyagoba lo sheetmetal uyokutsho ekupheleni ngaphambili clampbar ibanjwa endaweni magnetically. Ikona Isikali lula kumqheba ukuxelela i engile umqadi ukugoba ngawo onke amaxesha.
Q njani na ukukhulula workpiece?
A Njengoko ubuyise engundoqo ukuphatha umazibuthe sokuyivula ngokuzenzekela off, kwaye clampbar pops up on iibhola zawo indawo entwasahlobo-kwixesha lolayisho, ukhulula workpiece.
Q Aziyi khona ubutsalane intsalela eseleyo kwi workpiece?
A Qho umatshini ikwacima, ukubetha kwentliziyo emfutshane reverse langoku ethunyelwa electromagnet ukuba iNTSHOLONGWANE magnetise ngcwele yona, workpiece.
Q njani na uhlengahlengiso ukuba ubukhulu metal?
A Ngu bujikwe adjusters ekupheleni nganye clampbar engundoqo. Oku kuyayitshintsha kugqitywe ukugoba phakathi phambi clampbar kunye umphezulu ezisebenzayo umqadi yokugoba xa umqadi phezulu 90 ° sikhundla.
Q njani ukwenza kumngcipheko liqengqiwe?
A Ngokusebenzisa umatshini JDC Ukugoba, ukuba azisongele le sheetmetal ngokuqhubekayo phantsi ubude ipipi intsimbi eziqhelekileyo okanye ibha ngeenxa zonke. Ngenxa yokuba loo matshini uya kusebenza magnetically oko ukubacinezela ezi zinto.
Q Ingaba zikhona pan-waqhekeza iminwe nokubotshwa?
A unesethi amacandelo ezimfutshane clampbar leyo ukuba eziplagwe kunye kwakhiwe iibhokisi.
Q Yeyiphi kuveza inxalenye elifutshane?
A ziqwempu I eziplagwe ndawonye clampbar kufuneka ibekwe ngesandla kwi workpiece. Kodwa ngokungafaniyo nezinye neziqhoboshi ipani, engontsini iibhokisi zakho inokuba babengabafo mda.
Q Yintoni clampbar slotted for?
A Kungenxa ukwakha neengcedevu curl kunye neebhokisi ngaphantsi kwe-40 mm ubunzulu. Ifumaneka njengento extra ungayikhetha kwaye kulula ukuyisebenzisa ngaphezu amacandelo standard mfutshane.
Q Yeyiphi ubude yetreyi enokwenziwa clampbar slotted emhlambini?
A nga ziyile nawuphi na ubude itreyi ngaphakathi ubude clampbar. isibini ngasinye of kwiindawo zokubeka libonelela ukutshintshwa zobungakanani ngaphezulu uluhlu-10 mm, kwaye ucime ezi kwiindawo zokubeka baye basebenza ngaphandle ngononophelo ukunika bonke ubukhulu kunokwenzeka.
Q namandla kangakanani na umazibuthe?
A electromagnet unako ukubacinezela nge-1 kwitoni usebenza 200 nganye mm ubude. Ngokomzekelo, i-1250E okubamba ukuya tonnes 6 ngaphezu ubude bayo ngokupheleleyo.
Q Ngaba ubutsalane kuguga?
A Hayi, ngokungafaniyo iimagnethi abasisigxina, lo electromagnet akakwazi ziguge okanye buthathaka ngenxa ukuyisebenzisa. Yenziwe olulula ngentsimbi ophezulu-carbon oko kuxhomekeke kuphela umsinga wombane kwindawo coil ngenxa magnetisation yayo.
Q Yintoni mbane efunekayo?
A ac 240 volts. Le modeli ezincinane (ukuya 1250E Model) ukubaleka ukusuka zesiqhelo 10 Amp iplagi. Models 2000E kunye phezulu kufuneka i-15 Amp iplagi.
Q Yeyiphi izincedisi weza standard kunye umatshini JDC Ukugoba?
A I-stand, backstops, full-ubude clampbar, iseti clampbars elifutshane, yaye incwadi zonke zinikwa.
Q Yintoni Uhlolo izincedisi?
ezikhoyo ziquka clampbar emxinwa, indawo clampbar slotted ngenxa yokuzimanya iibhokisi nzulu ngakumbi lula, yaye uchebe amandla isikhokelo for ubugqwetha-free ukusika tye sheetmetal.
Q Delivery Umhla?
Wonke modle ziye kuyo imfuyo, Sinako amalungiselelo ukuthunyelwa kuwe ASAP
Q Shipping imilinganiso?
650 Kuxhaswe: 0.88mx 1.0mx 0.63m =0.55³@120kg
1000 Kuxhaswe: 1.2mx 0.95mx 0.63m =0.76³@170kg
2000 Kuxhaswe: 2.2m x0.95m x 1.14m =2.40³@360kg
Q Umzekelo iimilo
Ya-, Nayiphi-engile bend, ezinemiphetho asongwe, eqinisa iimbambo, imijelo Valiwe, iibhokisi, nezibaya uphazanyiswa, imijelo anzulu, Buya ukugoba, amaphiko Deep
1. ukusebenza kakhulu kunokuba benders sheetmetal oluqhelekileyo.
2. Akukho umda ukuba ubunzulu iibhokisi.
3. Ngaba indlela imijelo nzulu, kunye namacandelo ezivaliweyo ngokupheleleyo.
4. nokubotshwa Zenzekelayo uze unclamping kuthetha ukusebenza ngokukhawuleza, ukudinwa ngaphantsi.
5. ebonisa ezichanileyo ne rhoqo beam-engile.
6. setting Quick nangokuchanekileyo engile stop.
7. ubunzulu umqala Unlimited.
8. ubude Infinite ukugoba ngokwamanqanaba kunokwenzeka.
9. Vula uyilo ophele ivumela ukusonga iimilo ezintsonkothileyo.
10. Machines kungenziwa nokona, ekupheleni-to-ekupheleni ixesha elide ukuvumela.
11. umane ngokulula ku tooling elungelelanisiweyo (imivalo eligaqa lomnqamlezo-macandelo ezizodwa).
12. Self-ukukhusela - umatshini ayikwazi isindwe.
13. Uyilo Ukucoceka, compact kunye mihla.
Iiprojekthi School : iibhokisi isixhobo, letterboxes, cookware.
Electronics : chassis, iibhokisi, nezinye izinto.
Nezixhobo ze-ofisi : ezishelfini, nekhabhathi, ikhompyutha-nqwelo.
Processing Ukutya : olubi engatyiwa & neziciko esitulweni, neenkontsho exhaust, iifatyi.
Iimpawu ezikhanyisayo & boonobumba metal.
Izifudumezi & copper ezo.
Manufacturing : AMAGQABAZA ▸, izinto imveliso, izingxobo oomatshini.
Electrical : switchboards, nemiluko, izifakelelo ukukhanya.
Automotive : ukulungiswa, ikharavani, imizimba van, iimoto nemidyarho.
Kwezolimo : oomatshini, imigqomo, zeBRT, izixhobo zobisi engatyiwa, ezishedini.
Isakhiwo : flashings, facias, iingcango igaraji, shopfronts.
Asinika Garden, iglasi-izindlu, izithuba zocingo.
Isixhobo : imibhobho, amaqhosha sethutyana, amagumbi epholileyo.
Q I kwiihenjisi ezizodwa ezimbaxa centerless
ziqulunqwe ingakumbi JDC Bend ™, zisasazwe kubo bonke ubude umqadi ayeguqa yaye ngaloo ndlela, ngathi clampbar, thatha ayeguqa imithwalo kufutshane apho generated.The odityanisiweyo nefuthe nokubotshwa otsalayo kunye centerless ezizodwa iihenjisi iindlela ukuba JDCBEND ™ kuyinto compact kakhulu, ogcino isithuba, umatshini kunye ngamandla-to-weight ratio eliphezulu kakhulu.
kuba indawo le workpiece
okwakha iibhokisi nzulu ngakumbi ngokukhawuleza
ingagcinwa kwakhona ngokukhawuleza ngcono kumaqhekeza ngentsimbi ukunceda phinda-up imilo nzima, nangenxa yomsebenzi yemveliso clampbars kungadala kufakwe tooling ezizodwa.
oomatshini kuza incwadi eneenkcukacha leyo ibandakanya ukusebenzisa oomatshini kunye indlela yokwenza izinto ezahlukeneyo eqhelekileyo.
kunyuswa i mayiqhagamshelane zombane izinikele-ezimbini eqinisekisa ukuba amandla ekhuselekileyo pre-nokubotshwa lisetyenziswa ngaphambi kokuba kwenzeke nokubotshwa ngokupheleleyo.
nyanga-12 siqinisekiso lugubungela izinto eziphosakeleyo nokusetyenzwa phezu matshini kunye izincedisi.
Thina mveliso, siyayamkela OEM kunye ODM, kwaye kufuneka ukwakha intsebenziswano lwexesha elide kunye neenkampani ezininzi kangaka ixabiso lethu nengqiqo, inkonzo ebalaseleyo.
Q Ingaba unayo isiqinisekiso CE
ewe, nathi sibe isatifikethi, makhe undazise ukuba uyalufuna, ndiza kuthumela kuwe.
Q Ingaba unayo nayiphi na arhente USA.
EWE, Thina, makhe undazise ukuba ufuna naluphi na uncedo, ndiza kuthumela kuwe nombolo zoqhagamshelwano NO.
Q Ingaba isiqinisekiso imvelaphi ekhoyo?
ewe, isiqinisekiso imvelaphi zikhona